Atlanta Season 3 - Daty famoahana: voamarina na nofoanana? - Fialam-Boly
Atlanta Season 3 - Daty famoahana: voamarina na nofoanana?
Rahoviana no havoaka ny Atlanta Season 3?
Misy tranofiara ho an'ny Atlanta Season 3 ve?
Firy ny fizarana ao amin'ny Atlanta Season 3?
Iza amin'ireo mpilalao no miverina amin'ny Atlanta Season 3?
Atlanta, ilay andiany, izay nivoaka voalohany tamin'ny fararano tamin'ny taona 2016 ary niverina niaraka tamin'ny fizarana vaovao 11 tamin'ny martsa 2018, dia tsy nalaza afa-tsy nandritra ny fiatoana naharitra ela, ary ny mpankafy dia maniry ny hianatra hoe rahoviana izy ireo no hahita traikefa bebe kokoa momba an'i Alfred, Mahazo, Van (Zazie Beetz) sipany indray mandeha indray, ary Darius namany (lalaovin'i LaKeith Stanfield notendren'ny Oscar)? Novinavinaina teo aloha fa ny fisondrotan'ny mombamomba an'i Glover ho an'ny daholobe, izay ahitana ny asa mozika nahazoany Grammy ho Childish Gambino, anjara amin'ny franchise Disney, ary fifanarahana famokarana fahitalavitra lehibe, no nahatonga ny fahatarana. Na izany aza, betsaka kokoa ny Atlanta amin'ny asa, ary izao no fantatsika momba ny vanim-potoana faharoa sy fahatelo amin'ny seho hatreto:
Fantatray tamin'ny farany hoe rahoviana no afaka manantena hahita bebe kokoa amin'ny zava-dratsy nataon'i Earn and Paper Boi eo amin'ny efijery. Ny vanim-potoana faha-3 amin'ny FX dia hiseho voalohany amin'ny 24 martsa 2022, araka ny filazan'ny tambajotra. Taorian'ny efa-taona naharitra efa-taona, dia miverina eo amin'ny efijery ny seho, koa mientanentana ary mariho ny kalandrie ho an'ny Alakamisy amin'ity lohataona ity, izay handehanana indray mandeha isan-kerinandro amin'ny tambajotra ny seho. (Ho hita ao amin'ny Hulu ihany koa izy io ho serivisy streaming.)
Na dia feno fankasitrahana aza izahay fa nahazo an'i Atlanta mihitsy taorian'ny fiatoana naharitra toy izany, mbola misy Atlanta hafa hiandrandra tsy ho ela. John Landgraf, filohan'ny FX Networks sy FX Productions, dia nanambara nandritra ny fitsangatsanganana an-gazety nokarakarain'ny Television Critics Association tamin'ny Aogositra 2021 fa ny vanim-potoana faha-4 dia efa nosoratana ary ho famokarana mandritra ny fahavaratra 2021. Nohamafisina fa hiroso amin'ny rantsan-tananay izahay fa hivoaka voalohany amin'ny FX amin'ny faran'ny 2022 na ny fiandohan'ny 2023.
Jereo koa : Invincible Season 2: Miverina ve? Havaozina na nofoanana!
Nifanojo tamin'ny fampahafantarana ny datin'ny famoahana voalohany ny sarimihetsika, izay natao tamin'ny faran'ny Desambra 2021, ny famoahana ny tranofiara teaser iray. Miaraka amin'ny fijery mampiseho an'i Paper Boi sy ny ekipany mandeha (sy manao fety) manerana an'i Eoropa amin'ny fitetezam-paritra voalohany nataony, dia niseho ny vanim-potoana. ho lehibe sy tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Mahita ny andian-jiolahy iray manontolo any Frantsa, Holandy ary Royaume-Uni isika rehefa manao fanalam-baraka be dia be nefa mbola mahatsiaro tena ho toy ny vahiny tanteraka any amin'ny fireneny. Toy ny mahazatra any Atlanta, ny fanesoana manaikitra sy ny sary surrealista no andrasana, satria hita fa ao anatin'ny karazana junket mpanao gazety i Paper Boi mba hampiroboroboana ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny 2024. Afehezo ny fehin-tsezanao ary miomàna amin'izay toa fitsangatsanganana Eoropeana bibidia.
Tany am-piandohana, ny vanim-potoana faha-3 sy ny vanim-potoana faha-4 (izay efa voamarina) dia samy nahazo antoka fizarana valo, saingy (misaotra) dia nitombo io isa io rehefa niverina tao amin'ny efitranon'ny mpanoratra ny mpanoratra ary namerina ny antsipiriany. Araka ny voalazan'ny Deadline, ny vanim-potoana 3 dia ahitana fizarana folo, raha ny vanim-potoana 4 kosa dia misy fizarana valo. Ny isan'ny fizarana dia mifanaraka amin'ny natolotry ny andian-tantara mahazatra, miaraka amin'ny vanim-potoana 1 misy fizarana 10 ary ny vanim-potoana 2 misy 11. Horaisinay izay azonay atao.
Jereo koa : Daredevil Season 4: Daty Famoahana: Nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy ve izany?
Saika hiverina amin'ny vanim-potoana faharoa avokoa ny mpilalao voalohany. Tsy hitovy ny fampisehoana raha tsy misy an'i Donald Glover amin'ny anjara asan'i Earn, Brian Tyree Henry amin'ny andraikitry ny Paper Boi, LaKeith Stanfield amin'ny anjara asan'i Darius, ary Zazie Beetz amin'ny toeran'i Van. Mety ihany koa ny mijery bebe kokoa an'i RJ Walker, izay maneho ny Clark County, mpiangaly rap vao misondrotra izay saika hanao fitsangantsanganana miaraka amin'i Paper Boi amin'ny fiafaran'ny vanim-potoana 2. Mety ho i Matthew Barnes, izay milalao an'i Lucas, ilay mpitantana. ny Clark County izay mifaninana hanao sonia ny Paper Boi, dia hiverina ihany koa.
Jereo koa : Resident Alien Season 2 - Daty famoahana, tranofiara ary maro hafa!
Izany no momba an'i Atlanta vanim-potoana faha-3. Aza adino ny fanavaozana bebe kokoa ary mariho ny tranokalanay ho an'ny vaovao bebe kokoa. Misaotra Mamaky!
Inona ny tombam-bidin'i Tristan Thompson?
Scene Barrel tsy hita i Megan : Eto ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba izany
Madden 23: Daty famoahana mety hivoaka sy fanavaozana farany 2022!
Ampidiro ny vanim-potoana 2: nofoanana na nohavaozin'ny Amazon Prime tamin'ny 2022?
Inona ny tantaran'i Juila Fox? Manambady ve i Julia Fox amin'izao fotoana izao?
Daty famoahana The Wolf Among Us 2: Cast, Plot, Spoilers?
Navoaka voalohany tao amin'ny Netflix ve ny vanim-potoana faharoa voafafa?
Fantaro ny momba ny Fear Street Fizarana Faharoa: 1978
ny mahery fo akademia vanim-potoana 3 manoroka anime
nisy zavatra tsy nety nvidia geforce traikefa
ahoana no ahazoana robux maimaim-poana amin'ny roblox tsy misy fampidinana
amin'ny fotoana rehetra / mihetsika amin'ny solosainao
tolotra fitsapana maimaim-poana amin'ny sling tv